Usapomera CMS, Pomera iwo Musiki Dhizaini | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 22, 2012 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
Mangwanani ano ndanga ndiine kufona kukuru pamwe neanogona kuva mutengi nezve yavo nzira dzekutengesa dziri mukati. Ivo vakataura kuti ivo vaisangana nefemu kuvandudza yavo webhusaiti. Ini ndanga ndaona pamberi pekufona kuti vanga vatove WordPress uye vakabvunza kana vaizoramba vachishandisa. Akati zvachose kwete uye akati zvaityisa… aisagona kuita chero chinhu neake saiti yaaida. Nhasi arikutaura nekambani inozoenderera paExpression Injini.
Ini ndaifanirwa kutsanangura kuti tashanda pamwe Tsananguro Injini zvakanyanya, zvakare. Takashandawo naJoomla, Drupal, MarketPath, Imavex uye imwe yemamwe masisitimu manejimendi manejimendi. Nepo mamwe maCMS masisitimu anga achida kutarisirwa nehunyoro kuti awedzere mabhenefiti ese ekutsvaga nekudyidzana, isu takaona kuti mazhinji masystem eCMS akagadzirwa zvakaenzana ... uye chaizvo anongopatsanurwa neanoshanda mashandiro uye nyore kwekushandisa.
Ini ndinenge ndave kuda kubheja kuti uyu mutengi anogona kuita chero chinhu chaanoda kuita muWordPress. Dambudziko harisi WordPress, zvakadaro, ndiyo nzira yenyaya yake yakagadziriswa. Mumwe mutengi watakatanga kushanda naye nguva pfupi yadarika ndeye VA Loan Refinance kambani. Iyo ikambani huru - ichipa mari kudzoka kumahombekombe erupo nguva dzese pavanotora kuendesa. Kunyangwe isu tichiita toni yeWordPress kugadzirisa, isu takanyatso tenda kuti mutengi anogona kuve neyakanaka, yakagadziriswa, uye inoshandisika saiti pane chero CMS chero sezvavanogona paWordPress. WordPress iri kungofarirwa kwazvo izvozvi saka tinozviwana tichishanda zvakanyanya papuratifomu kupfuura vamwe.
VA Chikwereti vakatenga tsika yemaitiro uye vakatiroja isu kuti tikudziridze yavo yekutsvaga pamwe nemagariro mazano. Musoro wacho waive njodzi ... kusashandiswa kwemabhara epamberi, mamenu, kana majeti. Chinhu chega chega chakange chakaomarara-mune yavo template vasingashandisi chero eakanaka maficha anogara neWordPress. Isu takapedza mwedzi yakati wandei tichigadzirisazve dingindira, tichiisanganisa giravhiti Forms pamwe neLads360, uye vari kutogadzira widget iyo inotora yazvino mitero yemitero yekuratidzira pane yavo saiti kubva kubhangi kwavo.
Iri idambudziko rehurongwa nevakagadziri vetimu uye vamiririri. Ivo vanonzwisisa maitiro ekuti saiti iratidzike yakanaka, asi kwete maitiro ekunyatso shandisa iyo CMS kuisa ese akasiyana maficha ayo mutengi angangoda gare gare. Ndakaona Drupal, Expression Injini, Accrisoft Rusununguko, uye nzvimbo dzeMarketPath dzaive dzakanaka uye dzaishandisika… kwete nekuda kweCMS, asi nekuti iyo femu yakagadzira dingindira yaive neruzivo rwakakwana kuisa zvese zveCMS maficha anowedzera kutsvaga, zvemagariro, mapeji ekumhara, mafomu, nezvimwe. inodiwa.
Yakanaka theme dhizaini inogona kukudziridza yakanaka theme. Yakakura theme dhizaini ichagadzira theme iyo iwe yaunogona kushandisa kwemakore anouya (uye famba nyore nyore mune ramangwana). Usapa mhosva iyo CMS, pomera dhizaini dhizaini!
Tags: cmszvemukati manejimendi systemdrupalmafomu egiravhitiimavexinbound MarketingkusanganaJoomlamarketpathdingindiradhizaini dhizainiWordPress
Kukadzi 22, 2012 na3:51 PM
Chipikiri mumusoro. Isu tinogadzira yakanaka makumi mapfumbamwe muzana emapurojekiti edu neWordPress uye pane nguva dzaunonzwa makomendi akadai uye zvinhu zvakaita se "Zvakanaka, haigone kuita ________". Ndeipi yechokwadi mhinduro chaiyo ndeyekuti, "Kana pasati patova nechimwe chinhu kunze uko chinoenderana nezvido zvako (dingindira uye/kana maplugins), uye kana mugadzirisi wako achiziva mashandisiro eAPI, unogona kuita zvakanaka chose chaunoda kuita se. chero nguva uye bhajeti iripo. "
Asi dzimwe nguva mutengi anoisa pfungwa dzake pane chimwe chinhu "chitsva", saka iwe unoumburuka nacho kana kuramba.
Ndizvo zvinofadza. Mushure mekutanga basa kuReusser Dhizaini, ndakachinja zvakanyanya kushanda mukati meEE, CMS yedu yesarudzo, kubva kuWordPress, yandakashanda nayo zvakanyanya pandaiva ndega. Ini ndinobvumirana newe mune yangu WP madingindira akaita mutsauko wese. Chimwe chinhu chakaita seWooTheme's Canvas theme, semuenzaniso, yaive yakanaka kushanda mukati, paine mamwe "premium" uye madingindira etsika kunze uko anongo… icky.
Izvo zviri kutaurwa, ini ndinoda chaizvo EE yewebhusaiti manejimendi, mumamiriro ezvinhu apo "blogging" isiri yekutanga. Zviri nyore, zvinoyevedza, uye zvine simba zvakanyanya kupfuura WP, ndinofunga. Zvakadaro, kana iwe uchiita zvakawanda zvekunyora kana mabloggi mukati meCMS yako, hapana chinokunda ruzivo rwemushandisi weWP yemunyori iyeye.
Kukadzi 28, 2012 na10:26 PM
@awelfle:disqus Ndine hurombo kana zvasvika kuEE, yakanyorerwa zvakanyanya kune vanogadzira MVC. Ndiine izvozvo mupfungwa, ndinonzwisisa kuti budiriro iine hushamwari uye scalability uye haisi nyaya yakawanda. Sezvo ini ndisingazvifungi semugadziri wepamutemo, ini ndinowanzo kunamatira nezvinhu zviri nyore izvo zvisingade kufunga zvakanyanya (asi zvinogona kukonzera kukuvadza zvakanyanya!).
Kukadzi 28, 2012 na4:54 PM
Saiti ino inoita kunge yakagadziridzwa vhezheni yeTwentyEleven. Ndizvo here? Chero nzira, wakarurama; zvese nezve theme, kwete iyo CMS. Asi WordPress, IMHO, ndiyo yakanakisa chikuva chekushanda nacho panguva ino.
Kukadzi 28, 2012 na6:56 PM
Ziso rakanaka, @jonschr:disqus ! Idingindira rakagadziridzwa zvakanyanya reTwentyEleven… takaribvarura chaizvo! Isu hatisati tasvika pakuvhara ese mazita emusoro. Uye isu tinoda chokwadi chekuti tiri kupa vanhu vakanaka pa @Wordpress:disqus kutariswa kwavanofanirwa.
Kukadzi 28, 2012 na9:40 PM
Nekuda kuziva: Ndakasvika pano kuburikidza yakatwasuka HTML yekumisikidza peji iyo yakadhonzera mune ichi chikafu. Wadii kuzvibatanidza zvakananga? Ndiyo imwe yeWordPress 'yakanyanya kudhirowa kwandiri; akasiyana peji matemplate kune chero degree raunosarudza.
Kukadzi 28, 2012 na10:24 PM
Mhoro @jonschr:disqus - peji yekumhara yanga iripi? Isu tinoshambadza zvinongedzo kune saiti senge http://www.corporatebloggingtips.com asi kuda kutarisa traffic kudzokera kune imwechete sosi. Ini ndoda kuve neyese traffic pano, kusundira chiremera kumusoro kweiyi dura, uye ive nechokwadi chero chinongedzo kumashure chinosundira iyi domain kumusoro neinjini dzekutsvaga. Tariro ndizvo zvauri kureva! Kana ndikashambadza panzvimbo dzakawanda, ndiri kupatsanura chiremera ichocho… ndoda kuva nesaiti imwe yakasimba pane 1 isina simba.
Ehe, ndiye wacho! Hmm. Zvine musoro… Nyangwe, saka, wadii kungoita "peji yekumhara" peji reindex yesaiti ino? Hapana mhosva zvachose; ndongoshaya kuti advantage ndeyei. Ndinoda peji yekumhara, BTW. Zvakanakisa.
Feb 29, 2012 at 8:46 PM
@jonschr:disqus hapana mhosva yakatorwa zvachose! Iwe unogona kushamisika kuziva kuti iyo WordPress saiti, futi. Uye kune toni yemapeji emukati anoonekwa kumainjini ekutsvaga. Panguva yakaburitswa bhuku, zvaive zvakajairika kuve nepeji yekumhara yakanangana nebhuku. Ini ndaida kuve nedomasi yakagadziridzwa chete ye "corporate blogging" uye yakashanda zvakanaka. Ndaida kuti zvirimo zvigare zvichigadziridza pasaiti asi ini ndaisada kunyora imwe bhurogi zvachose - saka kudhonzera mukati mekudya, kutaurirana kwevanhu, uye kuishandisa sekarenda rezviitiko chengetedza ichigara ichichinja. Inomira zvakanaka pamatemu akati wandei saka yakaita basa uye inoramba ichititengesera mabhuku!